ANDRY RAJOELINA TAO AMPEFY: « Mitsoka mankany amin’ny Faritra Itasy ny fampandrosoana » – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:02
Ny lalana mihazo ny Ilôt de la Vierge.
Accueil/Politika/ANDRY RAJOELINA TAO AMPEFY: « Mitsoka mankany amin’ny Faritra Itasy ny fampandrosoana »
Araka ny efa nampanantenain’ny Filoha Andry RAJOELINA tamin’ny fihodinana faharoa tamin’ny fampielezan-kevitra nataony ny taona 2018 dia vita tanteraka ankehitriny ny lalana mihazo ny Îlot de la Vierge (5,4km) sy ny lalana mihazo ny Chute de la Lily (5km). Tamin’izany taona 2018 izany dia hita fa tena ratsy dia ratsy ny lalana mankany amin’ny ilot de la vierge. 30 minitra no nanaovana izany teo aloha, miala ao amin’ny sampan’Ampefy. Ny toerana misy ny Ilot de la Vierge izay malagasy ho manan-karena vato ihany koa. Namboarina tanteraka, araka izany, ity ampahan-dalana ity, ary nohajariana tanteraka ihany koa ny toerana misy ny “Ilôt de la Vierge”. Tsiahivina fa sady ivon’i Madagasikara ara-jeografika izany toerana izany no fanaovan’ny mpino kristiana fivahinianana masina izay naorina tamin’ny andron’ny Filoha Philibert Tsirananana.
Tsara ho fantatra fa ny 17 Septambra 1961 no notokanan’ny Filoha Phillibert Tsiranana ny « Ilôt de la vierge ». 60 taona taty aoriana indray vao nisy fanavaozana ny toerana. Teo amin’ny Îlot de la Vierge, araka izany, no notanterahina ny fanompoam-pivavahana fangataham-pitahiana ho an’ny firenena izay niarahan’ny Filoham-pirenena sy Ramatoa vadiny tamin’ireo mpino kristiana omaly.
Toerana mamokatra sady ahitana toerana maro manintona mpizahatany ny tanànan’Ampefy ary azo antoka fa hampiroborobo ny sehatry ny fizahantany any an-toerana ny fahavitan’ireo lalana ireo. Mitsoka makany amin’iny faritra Itasy ny rivotry ny fandrosoana hoy ny Filoha satria betsaka ireo fotodrafitrasa sy tetikasa mbola aorina sy efa napetraka ao an-toerana toy ny CSBII Manara-penitra, ny oniversite Manara-penitra, ny fanomezana ireo fitaovana lehibe fanamboaran-dalana ho an’ny faritra sy ny fampitaovana ireo tantsaha mpamokatra, sy ny sisa.
Nandritra ny lahateniny koa no nanambaran’ny Filoha Andry Rajoelina fa efa hotokanana tsy ho ela ihany koa ny lalana mihazo an’i Geyser. Eo koa ny fanaovana ny tetikasa goavana « Tanamasoandro » izay tafiditra ao anatin’ny Faritra Itasy.
TOLO-DALANA MOMBA NY FANALAN-JAZA : Adihevitra mafana eny amin’ny Antenimieram-pirenena
FIARAHAMONIN’NY MPANATOBY FANAFODY SY FARMASIA Notsinjovin’ny Solombavambahoaka ny fijalian’ireo Kaominina lavitra toeram-pivarotam-panafody
RAHARAHA FAMONOANA AN’I DANIL RADJAN : Naverina any am-ponja ireo voarohirohy, manohy fanadihadiana ny fitsarana
KERE ANY ATSIMO : Miaramila miisa 405 nalefa any Androy sy Ampanihy
FIARAHA-MIASA HO FAMPIAKARANA NY TAHAM-BOKATRA Hisitraka zezika biolojika amin’ny vidiny mirary ireo tantsaha